आज साँझ धनधान्यकी देवी लक्ष्मीको पूजा गरिंदै, शुभ साइत कति बजे? आज साँझ धनधान्यकी देवी लक्ष्मीको पूजा गरिंदै, शुभ साइत कति बजे?
आज साँझ धनधान्यकी देवी लक्ष्मीको पूजा गरिंदै, शुभ साइत कति बजे?
प्रकाशकराष्ट्रिय टाईम्स — 11/14/2020 12:03:00 pm 0
प्रकाशित: कार्तिक २९, शुक्रबार, विराटनगर ।
पाइलैपिच्छे केराको सुत्लो अथवा माटाको पालामा दीप प्रज्वलन गरी झिलीमिली बनाइन्छ । हाल पालामा दियोका स्थानमा मैनबत्ती बाल्ने प्रचलन बढ्न थालेको छ । आज सांझ ५ बजेर १३ मिनेट देखि ७ बजेर ५१ मिनेट सम्म लक्ष्मीपुजाको उत्तम साइत रहेको छ ।
आज साँझ युवतीहरु समूह बनाई घरघरमा भैलो खेल्छन् । भगवान् विष्णुले यमपञ्चकको पाँच दिन स्वर्ग, मर्त्य र पाताल तीनै लोकको शासन गर्ने वरदान बलिराजालाई दिनुभएको थियो । वरदान पाएका बलिराजाले भलो होस् भनी घरघरमा गाउन लगाएको सम्झनामा भैलो खेल्ने गरिएको हो । ‘भलो होस्’ भन्ने शब्द समयक्रममा अपभ्रंश भई भैलो हुन आएको पनि उहाँले बताए ।